Shiinaha Macdanta Wasakhda Biyaha Wasakhda Soosaarayaasha iyo alaableyda | KAIQUAN
Qulqulka: 10-320m3 / saacaddii
Madaxa: Ilaa 34m
Qiimaha PH: 4 ~ 9
Mashiinka looma adeegsan karo warbaahinta walxaha aadka u jilicsan iyo kuwa waaweyn .:
Qodista Faa'iidooyinka Bamka Bullaacadda Dhexdeeda:
1. Module goynta madaxbanaan, shaqo goyn wanaagsan, ma sahlana in la xannibo. Ilaa iyo inta laga soo gali karo dekedda nuugista, si fudud ayaa loo jar jari karaa. Qaado biyaha qashinka fudud, taangiyada qashinka, bulaacada isbitaalka iyo warbaahin kale oo ay kujiraan fiilooyin dhaadheer iyo dhuuban. Qaybaha waaweyn lama qaadi karo. Hawsha kala-jariddu waxay ka hortagi kartaa mashiinka iyo dhuumaha inay xiraan qashinka ku jira bullaacadda. Si kastaba ha noqotee, si loo hubiyo kalsoonida hawlgalka bamka, waxaa lagugula talinayaa in lagu rakibo aaladda wasakhda wasakhda deegaanka ee ka baxsan dhexdhexaadka.
2. Module goynta wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo birta wax lagu dhejiyo wuxuuna soo maray daaweyn kuleyl ah. Mindidu waxay leedahay adkaansho ku filan waxayna ilaalin kartaa awood goyn xoog leh muddo dheer. Haddii awoodda jarjartu hoos u dhacdo muddo dheer, qaybta goynta ayaa si gooni ah loo beddeli karaa.
3. Labada dhinac ee matoorka iyo dhinaca mootada labadaba waxaa lagu qalabeeyey shaabado farsamaysan si loo gaaro isku-kalsoonaanta isku-xidhka shamiitada mashiinka laba-geesoodka ah ee lagu kalsoonaan karo. Saliida qolka saliida waxay si buuxda u saliideysaa una qaboojineysaa shaabadda farsamada.
Hore: Bamka Kiiska Kala Saara KQSN
Xiga: Submersible Axial, Bambooyin Qasan isku Qasan
Qodista Jaantus Qaab Dhismeedka Bamka Bullaacadda
Qodista iyo Qeexida Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Bamka Bullaacadaha